Semalt Expert: Te-handatsaka ny tra-boina amin'ny mpitsikilo cyber? & Ndash; Mbola tsy namaky ity lahatsoratra ity mihitsy!
Semalt Expert: Te-handatsaka ny tra-boina amin'ny mpitsikilo cyber? - Mbola tsy namaky ity lahatsoratra ity mihitsy!
Amin'ny fiainan-taona, ny aterineto dia nahatonga ny fiainantsika ho mora. Vita izao ny zava-drehetraazo jerena ety anaty aterineto, ary tsy azontsika atao ny manakana antsika tsy hiditra amin'ny vokatra sy serivisy marobe. Amin'izany fotoana izany, marina izanydia nitombo ny isan'ny pejin-drindrina an-tserasera sy ny fanaovana hosoka.
Ross Barber, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia nanamarika fa amin'ny toe-javatra toy izany, mety tsy ho vitanao ny hitoetra ho voaro amin'ny aterineto raha tsy mitadidy ireto zavatra manaraka ireto:
Ny fangalarana ny maha-izy azy dia antsoina koa hoe "Fahalalan'ny maha-izy azy". Famonoana izanympikirakira miezaka ny mahazo ny mombamomba anao manokana amin'ny fampiasana tranonkala media na mailaka sosialy. Azony atao ny miditra amin'ny nomeraon'ny fiantohana ara-tsosialy, kreditny antsipirian'ny karatra, ary ny laharan'ny fahazoan-dalana - scivoli gonfiabili per bambini noleggio furgoni. Raha vao mahazo ny mombamomba anao izy, dia azo ampiasaina hividianana zavatra tsy ara-dalàna, ary metyMila mandoa ny vola amin'ny paosinao ianao. Izany no antony tokony hisorohanao amin'ny halatra toy izany ary tsy tokony hizara ny fahalemenaofampahalalana amin'ny olona amin'ny Internet. Azo atao ny mamantatra hackers na scammers raha tsy mamaly amin'ny mailaka tsy fantatra, antso an-telefaonana hafatra. Zava-dehibe ihany koa ny tsy hizaranao ny antsipirian'ny banky amin'ny olona tsy fantatra..
Ny hosoka fampidiran-dresaka iray dia iray amin'ireo karazana fandrika mahazatra indrindra. Amin'ny ankapobenydia mampanantena ireo niharan-doza ho ampahany betsaka amin'ny vola midadasika be, ho setrin'ny fandaniana kely manoloana. Ny olona dia mora voafandrikahackers raha te-hahazo vola amin'ny fotoana fohy. Raha mandoa vola ianao, dia misy ny fahafaha-manjavona amin'ny hackvola, ary tsy hahazo valiny velively amin'izy ireo ianao. Matetika no manomboka io hosoka io amin'ny mpanao hosoka amin'ny fifandraisana amin'ny olona amin'ny mailaka, ny media sosialytranonkala na WhatsApp. Raha misy olona mangataka anao handoa onitra, dia tsy tokony ho tratran'ny tricks toy izany ianao raha toa ka tsy maintsy ho piraty izy.Ny orinasa sy ny mpivarotra azo antoka dia tsy mangataka ny mpanjifany handoa zavatra mialoha.
hosoka amin'ny karatra
Ny olona any Etazonia sy Canada dia lasibatry ny karatra fahazoan-dalanafisolokiana. Ity karazana hosoka ity dia midika matetika ny karatra fandoavam-bola toy ny karatra debit na karatra fampindramam-bola ho loharanon'ny fifanakalozana. Mety hanontany ny hackersianao hizara ny tsipiriany momba ny karatry ny karatra amin'ny alàlan'ny mailaka na rohy amin'ny tranonkala Zava-dehibe ny hitazomana ny mombamomba anao ary tsy hizara izanymiaraka amin'ny antoko fahatelo amin'ny aterineto. Na dia voafetra ho amin'ny ampahany kely ihany aza ny fisian'ny hosoka amin'ny carte de crédit, dia mety hitondra goavana izanyny fahavoazana ara-bola raha toa ka tsy azo averina ny fifindran'ny hosoka. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, dia mihoatra ny roapolo ny Amerikanina no navotsotra beisa noho ny hosoka amin'ny carte de crédit. Ny olona any Royaume-Uni dia very 500 tapitrisa dolara tamin'ny taona teo aloha noho ny karazana trangan-javatra toy izany.
Raha efa very ny karatrao na nangalatra ianao dia tsy maintsy manontany ny manodidina anaobiraon'ny banky mba hampiato azy. Misy ny vintana hampiasa ny karatra fampiasanao hackers mba hampitaovana zavatra mahagaga.